सरकारले हतारमा गरेका दुई निर्णयको आलोचना
As of Thu, 18 Jul, 2019 05:15
सरकारले विखण्डनवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेर उनलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याएको केही दिनपछि नै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारका दुवै निर्णय विवादमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै सरकारका यी दुई निर्णयमा एकमत छैन । कतिपयले सीके राउतसँगको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षित चालबाजीसमेत भन्ने गरेका छन् । त्यसैगरी चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध पनि सरकारले हतारमा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यिनै राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तिसँगको कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा टेकेर चीन ताक्ने रणनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौता नेपाल टेकी चीन ताक्ने रणनीतिअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य दबाबको परिणाम भएको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै आएका डा. सीके राउतले रातारात ‘युटर्न’ गरेका छन् । वार्ताका लागि संसद्बाट संसदीय वार्ता समिति बनाएर वार्ता गर्न प्रयास गरिएको शक्ति नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि बन्देज लगाइएको छ । यो अलिकति खुट्याएर हेर्दा रहस्यमयी पोकोजस्तो देखिन्छ । संसद् निर्माण भएपछि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरियो । सोमप्रसाद पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी सबै सँग वार्ता गर्ने जनाउ दिए । राजपाका नेता महन्थ ठाकुरसँग जाँदा ठाकुरले आफू डा. सीके राउतको लहरमा बसेर वार्ता नगर्ने सल्लाह दिएको देखिएपछि आफू सीके राउतसँग वार्ता नगर्ने भनिएको पनि मिडियामा देखियो । संसद्को वार्ता समितिलाई डा. सीके राउतसँग वार्ता गर्ने अधिकार भएन वा दिइएन, तर अधिकारै नभएको व्यक्तिले वार्ता गरेर देखाइदिएको देखिन्छ । यो सम्झौताको पछाडि चीनको उदयलाई सुनिश्चित हुन नदिने शक्तिहरूको हात हुन सक्ने देखिएको छ ।
मधेसमा कचिङ्गल मच्चाउन लगाउने यसको अर्को अभीष्ट हो । सीके राउतलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई ध्वस्त गर्ने ‘वारहेड’ बनाएर पठाइएको छ । यो वारहेडले आफूलाई मास्न आएको देखेपछि राजपा र फोरम चुप लागेर बस्ने हुँदैन । राउतलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन बाँकी नै छ । राउतलाई बलियो नबनाई राजपा र फोरमलाई तह लगाउन सकिने अवस्था नरहेको राउतपछाडिका शक्तिहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले राउतलाई खुसी तुल्याएको र राजपालाई दुःखी बनाएको नीति लिइएको देखिएको छ । आफैं शपथग्रहण गर्न लगाएको सांसदलाई जन्मकैदसम्मको फैसला गर्न लगाइएको छ । सबैलाई थाहा भएको विषय हो, राजनीतिक मागका लागि कैलालीलगायत विभिन्न ठाउँमा संघर्ष भयो । धनजनको क्षति भयो । त्यही क्रममा कैलालीलगायतका ठाउँमा अप्रिय घटना घटेको देखियो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम यस्ता घटनाहरूमा हुने गरेको पाइन्छ । सत्यतथ्य सामुने ल्याउन गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसम्म गरिएन । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तवरले नै हुन्छ । सीके राउतलाई सम्झौतामा बाँधेर ल्याउनु राजनीति हो भने राजपा र फोरमको आन्दोलनमा सरिक भएकाहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहनु भनेको भेदभावको नीति लिइएको प्रस्ट छ । जसरी राजपाका नेताहरूले न्याय दिने विषयमै भेदभाव भएको लगाएको आरोप सही नजिक पुगिन्छ ।
विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले समस्याको समाधान दिँदैन । विप्लव समूहले भनेजस्तै अधिकार प्राप्त व्यक्तिसँग वार्ता गर्नेर सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिसँग अधिकार नभएको देखिएको हो । नभए उसले सीके राउतसँगको वार्ता प्रक्रियामा पहल लिन सकेको हुने थियो ।
यसको अन्तर्यमा नेपालमाथि टेकेर चीनविरुद्ध प्रहार गर्ने नीतिले काम गरेको राजनीतिक कूटनीतिक सुँघाइले आभास दिइरहेको छ, तर सकारात्मक भनेको पृथक्तावादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको पहल हो ।
ओलीलाई सघाएको पुष्टि भयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. सीके राउतको साँठगाँठ यसबाट पुष्टि भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा डा. सीके राउतले सघाएका थिए । ‘कोठाबाहिर मतदान गरौं’ भन्ने नारा राउतको थियो । गोप्य नारा थियो, ‘कोठाबाहिर मतदान गरौं, एमालेइतर हराऔं ।’
त्यसको पारितोषिक दिन मूलधारको राजधानीमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलेका हुन् । त्यतिखेर केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष थिए । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिने निर्णय गरिसकेको थियो । ओलीलाई सघाउन र मधेसमा भएका बलिया शक्तिलाई निर्वाचनमा कमजोर बनाउन डा. सीके राउतले आफ्नो स्वतन्त्र मधेस संगठनका तर्फबाट निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लियो । मतपत्र लिने र कोठाबाहिर मतदान गर्ने नीति थियो डा. राउतको ।
मधेसमा बलिया उम्मेदवारलाई बढी भोट नजाओस् भन्ने योजनासहित ओलीले राउतलाई बहिष्कार गर्न लगाएका थिए । राउतको बहिष्कार योजनाले कसैलाई बेफाइदा पुगेको थियो भने त्यो राजपालाई पुग्यो । यो त्यतिखेरको साँठगाँठ अहिले स्पस्ट भएजस्तो छ । नभए वार्तामा सामेल गराउन खोजेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई लखेटिएको छ ।
पृथक्तावादी एजेन्डा बोकेका राउतलाई रातारात सम्झौता गराएर मूलधारमा ल्याएका छन् । उनीहरूबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताका विषयमा स्पष्ट हुन अझ बाँकी छ । सरकारले सम्झौताका अस्पष्ट विषयहरूबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्लवलाई टाढा पठाउनुको कुरो बुझ्न सकिएको छैन् । विप्लवका एजेन्डाहरूबारे सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ ।
हुन त यो सरकार नै पत्यारिलो नभएर पनि विप्लव समूह टाढिएको हुन सक्छ । राजपाले शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्दा मान्छे मार्ने सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरेका थिए । संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले समर्थन दियौं । आन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राजनीतिक मुद्दाबारे राजनीतिक निर्णय लिन भनिएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा केही पहल भएको पनि थियो, तर सरकार फेरिएपछि यो सरकार त झन् दुईतिहाइको भएकाले संशोधनका मुद्दा पूरा हुने, राजनीतिक गतिविधिमा लागेका कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोेलनमा भाग लिएकहरू अपांग भएका छन्, तिनको भरणपोषणको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।
यो सरकारले त्यसो नगरी जनताको मतबाट जितेका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हुन अघिसम्म राजनीतिक उपायको खाजी गर्न सक्थ्यो, त्यसो गर्न सकिएन । अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने काम पनि गर्न सकेन । यो सरकारले देशमा द्वन्द्व चर्काउन खोजेको जस्तो छ । विप्लवमाथि लगाएको बन्देजपछाडिको राजनीतिक अभीष्ट जे भए पनि सरकारले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि सरकारविरुद्ध उठाउन बाध्य पारिरहेको छ । राउतसँग सम्झौता गरी चौतारा दिएको सरकारलाई विप्लवलाई गोली हान्ने नीति लिएबाट देशमा द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, हामीले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीका बारे सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरी थप द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको देखिएको छ ।
लाल आयोगले समयमा सार्वजनिक गरेको सांसद चौधरीका बारेमा सदनले उपायको खोजी गर्न सकेको भए हुने थियो । अन्य कतिपय राजनीतिक कार्यकर्तालाई अझ घरपरिवारसँग टाढिए बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसो नगरी सरकारले देशमा अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
राउतलाई ल्याउनुमा ओलीको कुशलता झल्कन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताको अभीष्ट देश र जनताको पक्षमा भएको साबित होस् । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका लोकतान्त्रिक शक्ति हौं । हामीले हाम्रा मागलाई छाडेर होइन मानेरै सरकारमा गएका छौं । सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौतामा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ ।
पृथक्तावादी लाइनमा राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका डा. सीके राउत मूल धारमा आउनु आफैंमा राम्रो कुरो हो । सम्झौतामा उनले उठाएका अधिकांश माग हामीसँग गरेका सम्झौताजस्तै रहेका छन् ।
हामीले आन्दोलनमा सक्रिय भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन भनेकै छौं । सरकारमा जानुअघि संविधान संशोधनको मुद्दालाई स्थापित गराएका छौं । संविधान संशोधनको मुद्दाभित्रका मुद्दाहरू अब डा. सीके राउतले उठाउने मुद्दाहरू रहेका छन् । उहाँ टाढा बसेर होइन सँगै बसेर आन्दोलनमा जानुपर्छ, मधेसको एजेन्डालाई स्थापित गराउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धि नै चाहेर राउतलाई सम्झौतामा आबद्ध गराएको भन्नुहुन्छ । त्यसअनुरूपको काममा राउतले सघाउनुपर्ने थियो । त्यसो सघाएको देखिएको छैन । सम्झौता गरेर मधेस झरेका राउतलाई स्वागत गर्न पुगेका कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएकै छन् ।
त्यसैले सम्झौताअनुरूप डा. राउतबाट प्रदर्शन हुन सकेको छैन, तर पनि पृथक्तावादी शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दक्षतालाई मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका बेला डा. सीके राउत बहिष्कारवादी शक्तिका रूपमा भाग लिएका थिए ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको जस्तो नभएर छुट्टै प्रकारको बहिष्कार गरेका थिए । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई जनतालाई मतपत्र लिएर कोठाबाहिर मतदान गर्न भनेका थिए । उनका समर्थकहरूले गरेका पनि थिए ।
राउतलाई मूल राजनीतिमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई झन् टाढा पठाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा अलि फरक खालको राजनीति देखिएको हो ।
झट्ट हेर्दा पहिलेको माओवादीको बेला सरकारले अख्तियार गरेको नीति जस्तो अहिले देखिएको छ । कस्न सुरु गरिएको जस्तो । अचानक यस्तो गरिएको हो । यसमा पनि कुनै राजनीति ओलीको हुनुपर्छ । यो फरक खालको राजनीतिको बठ्याइँ आउँदो दिनमा देखिनेछन् ।
अब संविधान संशोधन गरेर मधेसका जनताको विश्वास जित्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन बाँकी छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने र नगर्ने चाहिँ उनको पदीय गरिमालाई शोभा दिँदैन । सरकारमा सहभागी हुँदा फोरमसँग दुईबुँदे सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । संविधान संशोधन गर्ने भनेर गरेको पछिल्लो सम्झौता प्रधानमन्त्रीको विश्वास बोलेको छ । त्यो सम्झौताअनुसार संशोधन नभएकाले हामीलाई संविधानको विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन सक्दो छिटो गरी देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लाने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै छ । उनको आफ्नै नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ लाई पू्रा गर्न संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि समकालीन राजनीतिको अधिकतम विवादका विषयहरूलाई यसले समाधान गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि ध्यान दिनुहुनेछ ।
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हतारमा
हालै सरकारका दुईवटा निर्णयले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठूलो तरंग ल्याएको छ । एउटा, डा. सीके राउतसँगको सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता र अर्काे विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्धले राजनीतिक वातावरणलाई निकै तताएको छ ।
सीके राउतसँगको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देश अलग बनाउने भन्दै गतिविधि गर्ने शक्ति, भलै अहिले सानै किन नहोस्, त्यसले कालान्तरमा विशाल रूप लिन सक्थ्यो । यसको इमानदारीपूर्व कार्यान्वयनको अपेक्षा भने गरिएको छ ।
अहिले छिटफुट रूपमा आएका असन्तुष्टि, तरंगको प्रभावमा कोही पनि पर्नु हुँदैन । सुझबुझपूर्ण ढंगले नै लामो मन्थनबाटै डा. सीके राउत यो निर्णयमा पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ । चैत ४ र ५ गते यो पार्टीको जनकपुरमा हुने केन्द्रीय परिषदको वैठकले पार्टीको कार्यदिशा, पार्टीको नाम र झण्डाका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास मलाई लागेको छ । द्वन्द्वको बाटोबाट सहमति र सहयात्राको बाटोमा जाने कुराले नै सबैको भलो हुन्छ । यसमा सहमति गर्ने दुवै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा अर्काे तरंग ल्याउने विषय हो, विप्लवको नेतत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध । यो अलि हतारमा लगाइएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । छलफल गरेर निकास निकाल्ने सबै बाटो बन्द भएपछि नै यो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुप-थ्यो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक असहमति, संविधानमाथिका असहमतिलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत जनतालाई साथ लिएर सहज बाटोबाट जान छाडेर विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि हिंसामा जाने कुरालाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन थियो ।
अझै धेरै बिग्रिएको छैन । अझै पनि वार्ता र संवादको बाटोबाट शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जान पहल बढाउनु पर्छ । देशमा द्वन्द्वले अस्थिरता, अराजकतालाई मात्र बल पु-याउँछ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिलेको सरकारले स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जानका लागि जो पहल लिइरहेको छ, सबै मिलेर अगाडि जाँदा छिट्टै गन्तव्यमा पुगिन्छ । नेपाली कांग्रेसको नीतिगत, भौतिक कारणले देशमा पु-याएको ठूलो क्षतिलाई पूर्ति गर्न सबै वामपन्थी, समाजवादी शक्ति एक भएर जानुको विकल्प छैन ।
सरकारले सबै वामपन्थी र समाजवादी शक्तिलाई समेटर शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको यात्रामा लैजान पहल बढाउनुपर्छ । विचलित भएका कुनै पनि शक्ति छन् भने ठूलो छाती लिएर राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन उसले नै विशेष पहल बढाउनुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि जनतामा आफ्नो मागलाई सहज रूपमा लैजान पाउने अवस्थाबाट विचलित भएर हतारमा सशस्त्र संघर्षमा जाँदा उपलब्धिभन्दा पनि बढी क्षति पुग्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
विगतको जनयुद्धबाट उत्पीडित वर्गको पक्षमा अपेक्षाकृत नभएको कामको समग्र समीक्षा नगरी मनोगत रूपमा अगाडि जाँदा त्यसले सबैतिर क्षति पु-याउँछ । विप्लव जस्तो एउटा सपना बोकेको होनहार युवा नेताले आफैं फस्ने, राजनीतिक दुर्घटनाको बाटोमा हठात जाने धृष्टता कमसेकम अहिले गर्नु हुँदैन ।